भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फेरी नेपाल भ्रमणमा आउँदै, कहिले र किन आउदै छन् त ? हेर्नुहोस् ।। – Khabar28media
भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फेरी नेपाल भ्रमणमा आउँदै, कहिले र किन आउदै छन् त ? हेर्नुहोस् ।।
June 5, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फेरी नेपाल भ्रमणमा आउँदै, कहिले र किन आउदै छन् त?हेर्नुहोस्। काठमाडौं– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुनः नेपालको भ्रमण गर्ने भएका छन् । नोभेम्बरको अन्तिम साता उनको भ्रमण हुने नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ हुने नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।
बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागि भएर भारत फर्केका उनले पुनः चौथो नेपाल भ्रमण गर्न लागेको बताइएको छ । नेपाल भ्रमणमा आउँदा प्रधानमन्त्री मोदीले यसपटक लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने निश्चित भएको छ । पहिलोपटक भ्रमण गर्दा देखिनै लुम्बनी भ्रमण गर्ने तय भएपनि प्रधानमन्त्री मोदी विभिन्न कारणले त्यहाँ पुग्न सकिरहेका थिएनन् । यसपटक लुम्बिनी भ्रमणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने साथै नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद पनि समाधान गर्न प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्नुभएको बताइएको छ ।
नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद पनि समाधान गर्न प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्नुभएको बताइएको छ । उनले पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा जसरी जनकपुर भ्रमणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका थिए, त्यसरीनै यसपटक लुम्बनी भ्रमण र सीमा विवाद लाई प्राथमिकतामा राखेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसबाहेक अन्य उच्चस्तरीय भेटघाट हुने बताइएको छ । यद्यपि, अहिले भ्रमणको मिति र कार्यक्रम तय नभएको उक्त स्रोतको दावी छ ।
Previous Article जतिसुकै बिजी भए पनि १ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : नपढे तपाईलाई पछुतो हुनेछ !!
Next Article आधा विवाह नसकिदै एक्कासी मण्डपवाटै वेहुला भागे, कारण सुन्दा सबै आश्चर्यचकित !!